musha / Interior design / Chii Chinonzi Magnetic Suction Lamp?
2021 / 05 / 30 kupatsanuraInterior design 6958 0
Nekusimuka kweminimalism mune yekugadzira nyika, dhizaini dhizaini yemwenje isina main magetsi auya. Magnetic magetsi ave chinhu chakakosha chemukati chemwenje dhizaini, saka chii chaizvo chinonzi magnetic mwenje? Ndezvipi zvinoshandiswa zvemagineti mwenje uye anofanirwa kuve akagadzirwa sei? Nhasi, tichakurukura kuti chii chinonzi magetsi emagetsi kubva pane zvinotevera zvinhu.
Zvakanakira nekuipira magineti mwenje
Mhando dzemagineti mwenje
Zviratidzo zvinoshanda zvemagineti mwenje
Kuisirwa nzira yemagineti mwenje
Mutengo uye mhando yemagineti mwenje
Yakakwirira inochinjika uye yemahara kugadzirisa.
Magnetic suction mwenje unogona kugadziridzwa chero nguva zvichienderana nezvinodiwa, mhando yemarambi uye huwandu hwemarambi anodiwa kutsvaga. Inochinjika kushandisa.
Mhando dzakasiyana dzechiedza sosi mhedzisiro.
Iyo dhizaini yemagineti mwenje inotora iyo pfungwa ye modularity. Mushure mekumisikidza gwara, unogona kusarudza zvakasununguka manyorerwo echiedza. Iwe unogona kusarudza kubva pamhando yakakura kwazvo. Marambi emwenje, mwenje, grille mwenje, mafashama mitsetse, pendant tambo mwenje izvi zvinogona kusarudzwa, asiwo akasiyana masitayera nekushandisa. Maitiro emwenje anovhenekera mhedzisiro yechiedza kwakasiyana, inokodzera dzakasiyana siyana dzakasiyana zviitiko zvido.
Hapana siringi inogona zvakare kuwanikwa pasina main light.
Yakasanganiswa neye yakakurumbira minimalist dhizaini dhizaini, iyo yekuvhenekesa dhizaina isina main light iri zvishoma nezvishoma iri kuwedzera uye kuve inozivikanwa. Asi kazhinji, usaite mwenje wakakomba wakaiswa pasi mwenje kana kubatidzwa mwenje kuti uwane, izvo zvinosarudzira kuti hakuna siringi haigone kuita mainbane. Iko kubuda kwemagineti ekutsveta marambi anogona kuve akafanotangira-kuiswa kumusoro kwepamusoro penzira, uye wozoisa yemagineti yekutsveta marambi, kuti uwane kuzadzikiswa kwekusina siringi isina main light.
Kana uchikwatanura nekugadzirisa, chingobvisa magetsi uye tora marambi nemarambi kubva pane yemagineti yekutsvaira. Izvo zvakare zvakareruka kwazvo kugadzirisa patsva uye kutsiva pane inotevera nhanho. Nekudaro, kunyangwe iyo magineti mwenje sosi iri nyore kubvisa uye kutsiva, asi iyo magnetic mwenje track yakagadziriswa. Kana iwe ukasangana nehurombo kuonana, track kukuvara, kugadzirisa zvakare kwakaomarara kwazvo. Saka chimiro ichi chakanaka uye chakaipa, hachigone kunzi mukana zvachose.
Kuiswa kwemagetsi emagetsi emagetsi. Chekutanga pane zvese, iwe unofanirwa kuita iyo siringi, ita yakakosha yemagineti yekukweva mwenje track track. Izvi zvinoshandiswa kuisa iyo magnetic light track, zvichidaro ichiwedzera mutengo wekuvakwa kwedenga.
Kuvaka kwevashandi hakuna hunyanzvi zvakakwana.
Kuiswa kwemagineti mwenje kunoda kubatana kwepamusoro pevhu uye dhizaini dhizaini. Kuveza uye yemagetsi interface, kunyanya yepamusoro pevhu maitiro inoda zvakanyanya kuomarara. Saka kusava nehunyanzvi kwevashandi kunogona kutungamira mukuisirwa kwakashata nekushandisa.
a. Teedzera mhando
Yakabatanidzwa track yakavanzika yakaiswa mudenga nzira. Kuiswa kwakadai kwetraki kunofanirwa kuve nekubatana kwedenga. Pano iwe unofanirwa kutarisisa kune upamhi hwenzira, kune kazhinji 40MM uye 25MM maviri saizi. 40MM inonyanya kushandiswa mukugadzirwa kweruzhinji, imba inokurudzirwa kusarudza 25MM.
Ceiling-yakatasva njanji ndiko kushandiswa kwe clip yakamisikidzwa mune yekutanga siringi track, hapana siringi. Iyo yekutanga yepamusoro yepamusoro inogona kugoneswa nemagineti kukweva mwenje kuiswa.
Pendant mutsetse wemagineti kukweva mwenje track
Pendant mutsetse wemagineti yekukweva track inonyanya kushandiswa mukugadzirwa kwenzvimbo yeruzhinji hofisi. Nzira yekumisikidza nzira inoshandiswa kana iyo nzvimbo kukwirira yakanyanya kukwirira.
b) Mhando dzemarambi nemarambi
Sangana nemwenje wekutanga zvichienderana nekona inochinjika yekutarisisa inogona kuwana chaiyo yekutarisa. Iyo inochinjika uye inogadziriswa, ichijekesa tarisiro yemwenje.
Sangana nemwenje wekutanga, mhando dzinotenderera dzinogona zvakare kusangana nezvinodiwa zvemazhinji-angle mwenje kuti uwane mhando dzakasiyana dzekushambidza madziro.
Mafashama emwenje, mwenje yunifomu yakabuda. Inogona kusimudzira kupenya kwenzvimbo uye inosangana nemwenje wekutanga. Iyo chimiro inogona kuunza yakashomeka yakawedzerwa yekuona chiitiko uye kusimudzira mwenje wemwenje.
Pendant mutsara mwenje
Kana iyo nzvimbo kukwirira yakanyanya kukwirira uye iwe uchida kuti uone iko kwekuvhenekesa mhedzisiro, unogona kusarudza iyo pendant mutsara mhando yemagineti yekukweva mwenje.
Zviratidzo zvinoshanda zvemagineti anokaka mwenje
Magineti mwenje yenzvimbo yepamba haigone kungotamba yekutanga yekuvhenekesa chinzvimbo, asi zvakare inosangana nezvinodiwa zvemunharaunda mataurirwo emwenje. Kunyanya yeiyo minimalist dhizaini, magineti mwenje haingotamba chete basa rekuvhenekesa. Dzimwe nguva iyo track + mafashama emwenje zvakare iri chikamu chemashure dhizaini.
Magnetic magetsi anowanzo shandiswa mukugadzirwa kwenzvimbo dzehofisi kusimudzira mamiriro ekunze pasina kuomesa. Iyo modular dhizaini inowedzerawo kuchinjika kwechiedza.
c. Kicheni uye yekugezera nzvimbo
Mukicheni uye munzvimbo yekugezera, kana iwe ukashandisa iyo plasterboard siringi, iwe unogona zvakare kushandisa magineti mwenje. Mhedzisiro yacho ichave yakanyanya kushomeka. Kuvhenekera kumwe chete kunogona kushandisa mwenje wemafashama kana mwenje. Kuvhenekera mwenje pamberi pegirazi kunogona kushandisa mavara kana girobhu.
Iyo yekumisikidza nzira yemagineti mwenje sosi iri nyore kwazvo. Iwe unongoda kubatanidza yakasarudzwa mwenje sosi kune yakaiswa track, gadzirisa chinzvimbo uye kona. Kuisirwa kuri nyore kwazvo.
Pre-kuvigwa yakamisikidzwa (siringi haina kupera)
Isa iyo track pre-set pamberi pasiriniki yakavharwa, uye wobva wasimbisa bhodhi pamwe nedenga rekurapa kwehuswa. Izvi zvinounza yakatetepa track chimiro neyakareruka modelling.
Yakagara-yakadzika midzi (siringi yapera)
Kana siringi yapera, uchiri kuda kuisa magineti mwenje. Iwe unogona kucheka slot kumusoro kwepamusoro uye nekuisa iyo track. Ipapo iyo track ichave yakapendwa, nokudaro ichigonesa kushandiswa kwemagineti ekuyedza mwenje. Iyi nzira inounza zvimwe sarudzo kune vatengi vakatoita yepamusoro pevhu kurapwa asi vachiri kuda kushandisa magineti mwenje.
Kana iyo nzvimbo yekukwirira yakashomeka, kana bhajeti zvipingamupinyi zvisingade siringi, kana iwe uchiri kuda kuisa marambi emwenje, unogona kushandisa yakavhurika maitiro. Gadzira snap pazasi uye isa iyo track pane yekutanga yepamusoro pevhu. Gadza iyo inoshandura nzvimbo, yakafanana inogona kuwanikwa neinogadzira mwenje kuisirwa.
Pamusoro peiyo yekutanga yepamusoro pevhu, kana iwe uchida kuve neese ari maviri anochinja uye akapusa maficha emagineti yekutsveta mwenje, asi zvakare unoda kudzikisa kukwirira kwechiedza sosi. Iwe unogona kufunga yakaturika track, yakaturika track mune dhizaini yeruzhinji hofisi nzvimbo inonyanya kushandiswa zvakanyanya.
Sezvo iyo magnetic suction mwenje iri yakaderera-voltage track, saka iwe unofanirwa kushandisa shanduko. Chinja 220V AC simba kusvika 24V uye 48V yemagineti yekutsvaira track kubvisa njodzi yekuvhunduka kwemagetsi. Iko kunowanzo kuve maviri marudzi eanoshandura, imwe-chidimbu uye pre-yakavakwa. Chimwe-chidimbu chinoshandura chakapfupika, asi mazhinji e2MM track haigone kushandiswa nehupamhi nekuda kwedambudziko. Vashanduri-vakavigwa kare vanowanzoiswa munzvimbo dziri nyore kuwana nekuchengetedza. Senge yepakati mhepo inotonhorera yekuwana chiteshi, mukati meyakarembera kabati, mukati memba yemagetsi bhokisi, uye panguva yechiedza strip zororo.
▲ General transformer
▲ Yakareba yakakosha shanduko
Mutengo uye Brand yeMagnetic Chiedza
Mutengo wemagineti mwenje unoumbwa nenjanji, marambi uye zvishongedzo. Mutengo wakasiyana unosiyana zvichienderana nezvinhu zvakasarudzwa Mutengo wenjanji yacho unosvika 90-150 yuan pamamita. Kuvhenekesa, ipapo 100-300 yuan imwe neimwe. Iko kutengwa kwese kwebhizinesi kunobatsira kuronga izvo zvinodiwa nenhumbi uye nhamba ye.
Pakapfuura :: Chii Chinonzi Cement Paint? Zvadaro: Chii chinonzi Liquid Marble?